“မြန်မာနဲ့ ထိုင်း ဘာလို့ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာခြားနေလဲ ? (သိသင့်လို့ ဖတ်ကြည့်ဗျာ)” – Amara News
“မြန်မာနဲ့ ထိုင်း ဘာလို့ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာခြားနေလဲ ? (သိသင့်လို့ ဖတ်ကြည့်ဗျာ)”
မဲဆောက်- မြ၀တီ ထိုင်းမြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး အခြေအနေသတင်း BBC ကနေ နားထောင်ပြီး ပြည်မြန်မာ အရေးအတွက်ရင်လေးမိတယ်။တာဝန်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တော့“ပဲသမားကလည်း စိုက်ရင် ရှုံးတယ်။ကြက်သွန်နီကလည်း ရှုံးတယ်။ဒီတော့ ကျမတို့ရဲ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေက ထိုင်းဆီ ရောက်သွားတယ်။ထိုင်းမှာ သူတို့ဘာသွားပြန်လုပ်သလဲ။
ပြောင်းစိုက်တယ်။ ပဲစိုက်တယ်။ ငြုပ်သီးစိုက်တယ်။ အခုက ဒူးရင်းသီးလည်း ယိုဒယားပဲ။ သခွါးသီး ဂေါ်ဖီထုတ် ဂေါ်ဖီပန်း အကုန်ပဲ။ သံပုရာသီးကအစ။ကြက်လည်းဝင်တယ်။ဘဲဥလည်း ၀င်တယ်။ကြက်ဥလည်း ၀င်တယ်။ ငါး ပုဇွန်ကြော့လေးတွေကအစ။ကျွန်မတို့ဘက်က ဘာမှ မထုတ်နိုင်ဘူး။ ကျွနိမတို့ ထုတ်တာနဲ့ ရှုံးတာ။အဲ့ဒီလို မရှုံးအောင် နည်းပညာနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ကျွနိမတို့ စိုက်ပျိုးရေး အားကောင်းလာမယ်လို့ ထင်တယ်။
အဲ့ဒီအခါကျရင် သူများတွေဆီကလည်း ၀ယ်စရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။မဲစောက်ဘက်ကနေ မြ၀တီ မြန်မာဘက်ကို သွားနေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အခြေအနေတွေကို သိရဖို့ ကျနော်သွားကြည့် ပါအုံးမယ်။အခုကျနော် မဲစောက်လက်ကား ဈေးကွက်ကို ရောက်တော့ ဒူးရင်းသီးကား အစီး(၂၀)ကျော် သရက်သီးကား(၁၂)စီး နာနတ်သီးကား(၈)စီးအပြင် အသီးအနှံတင်ထားတဲ့ကား(၆)စီးလည်း မြဝတီဘက်ကို ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ မွေးမြူရေးကြက်အရှင်ငါးပုစွန်တွေနဲ့ အေးခဲထားတဲ့ ကြက်သားတွေနဲ့ ကြက်ကလီဇာတွေအပြင် ကြက်ဥ ဘဲဥတွေ တင်ထားတဲ့ ကားတွေပါ စုစုပေါင်း အစီးတစ်ရာကျော် နေ့စဉ်မြန်မာဘက်ကို သွားနေတယ်လို့ လက်ကား ကုန်သည်တွေက ကျနော့်ကို ပြောပြပါတယ်။ဘန်ကောက်ကနေ တိုက်ရိုက် မြန်မာဘက်ကို သွားနေတာတွေက သကြားကားတွေ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ်ဆီနဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ဂတ်စ်ဓါတ်ငွေ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ နှစ်ထပ် ကုန်ကားတွေမှာတော့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေက သတင်းစာ စက္ကူလိပ်ကြီးတွေ အထည်လိပ်တွေ သားရေတုလိပ်တွေ အပြင် သံပြား သံချောင်း သစ်သားတုတွေ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းတွေ များပါတယ်။ဒါတွေအပြင် transit ဖြတ်ကျော်ခွင့်နဲ့လာတဲ့ အလှကုန် စားသောက်ကုန်တွေ တင်ထားတဲ့ ကွန်တိန်နာ ကုန်သေတ္တာတွေလည်း အတော်များပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းဘက် ပြန်ဝင်တာက ငြုပ်သီးခြောက် ကြက်သွန်နီ ပဲမျိုးစုံ အာလူးတွေနဲ့ ကျွန်းသစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပရိဘောက အကြမ်းထည်တွေ တွေ့ရပါတယ်။
နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကနေ ထိုင်းဘက်ကို ၀င်လာတာက နွား သိုး ကျွဲ ဆိတ် နဲ့ ဓါတ်သတ္တု ကုန်ကြမ်းတွေကို တွေ့ရပါတယ် ခင်ဗျာ။”ကဲ အထက်က ကုန်စည် စီးဆင်းမှုကို ကြည့်ရင် မြန်မာတွေ ဘာ့ကြောင့် ဆင်းရဲနေသလဲ ထိုင်းတွေ ဘာ့ကြောင့် ချမ်းသာနေသလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဆီက ဘာမှ မထုတ်လုပ်နိုင်ပါပဲ လိုသမျှ ၀ယ်သုံးနေရတဲ့ အခြေအနေကနေ ပြောင်းနိုင်ပါမှ နိုင်ငံချမ်းသာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဝေးဝေး ကြည့်စရာ မလိုပါဘူး။
ရန်ကုန်မြို့ထဲက Super market တစ်ခုခု သွားကြည့်ရုံနဲ့ပြည်တွင်းထုတ် ဘယ်လောက်ရောင်းပြီး ပြည်ပကုန် ဘယ်လောက်ရောင်းတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။နိုင်ငံ တိုးတက်လာဖို့ နည်းပညာနဲ့ လုံလောက်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ အမြန်ဆုံး လိုနေပါပြီ။
မဲဆောကျ- မွဝတီ ထိုငျးမွနျမာ ကုနျသှယျရေး အခွအေနသေတငျး BBC ကနေ နားထောငျပွီး ပွညျမွနျမာ အရေးအတှကျရငျလေးမိတယျ။တာဝနျရှိတဲ့အမြိုးသမီးတဈယောကျကို မေးကွညျ့တော့“ပဲသမားကလညျး စိုကျရငျ ရှုံးတယျ။ကွကျသှနျနီကလညျး ရှုံးတယျ။ဒီတော့ ကမြတို့ရဲ့ လူ့စှမျးအား အရငျးအမွဈတှကေ ထိုငျးဆီ ရောကျသှားတယျ။ထိုငျးမှာ သူတို့ဘာသှားပွနျလုပျသလဲ။
ပွောငျးစိုကျတယျ။ ပဲစိုကျတယျ။ ငွုပျသီးစိုကျတယျ။ အခုက ဒူးရငျးသီးလညျး ယိုဒယားပဲ။ သခှါးသီး ဂျေါဖီထုတျ ဂျေါဖီပနျး အကုနျပဲ။ သံပုရာသီးကအစ။ကွကျလညျးဝငျတယျ။ဘဲဥလညျး ဝငျတယျ။ကွကျဥလညျး ဝငျတယျ။ ငါး ပုဇှနျကွော့လေးတှကေအစ။ကြှနျမတို့ဘကျက ဘာမှ မထုတျနိုငျဘူး။ ကြှနိမတို့ ထုတျတာနဲ့ ရှုံးတာ။အဲ့ဒီလို မရှုံးအောငျ နညျးပညာနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုတှေ ရှိတယျဆိုရငျ ကြှနိမတို့ စိုကျပြိုးရေး အားကောငျးလာမယျလို့ ထငျတယျ။
အဲ့ဒီအခါကရြငျ သူမြားတှဆေီကလညျး ဝယျစရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ပွောပါတယျ။မဲစောကျဘကျကနေ မွဝတီ မွနျမာဘကျကို သှားနတေဲ့ ကုနျပစ်စညျး အခွအေနတှေကေို သိရဖို့ ကနြျောသှားကွညျ့ ပါအုံးမယျ။အခုကနြျော မဲစောကျလကျကား ဈေးကှကျကို ရောကျတော့ ဒူးရငျးသီးကား အစီး(၂၀)ကြျော သရကျသီးကား(၁၂)စီး နာနတျသီးကား(၈)စီးအပွငျ အသီးအနှံတငျထားတဲ့ကား(၆)စီးလညျး မွဝတီဘကျကို ထှကျဖို့ ပွငျဆငျနတော တှခေဲ့ရပါတယျ။
ပွီးတော့ မှေးမွူရေးကွကျအရှငျငါးပုစှနျတှနေဲ့ အေးခဲထားတဲ့ ကွကျသားတှနေဲ့ ကွကျကလီဇာတှအေပွငျ ကွကျဥ ဘဲဥတှေ တငျထားတဲ့ ကားတှပေါ စုစုပေါငျး အစီးတဈရာကြျော နစေ့ဉျမွနျမာဘကျကို သှားနတေယျလို့ လကျကား ကုနျသညျတှကေ ကနြေျာ့ကို ပွောပွပါတယျ။ဘနျကောကျကနေ တိုကျရိုကျ မွနျမာဘကျကို သှားနတောတှကေ သကွားကားတှေ အမြားဆုံးဖွဈပါတယျ။ပွီးတော့ ဓါတျဆီ ဒီဇယျဆီနဲ့ မီးဖိုခြောငျသုံး ဂတျဈဓါတျငှကေ့ားတှေ ဖွဈပွီးတော့ နှဈထပျ ကုနျကားတှမှောတော့ မျောတျောဆိုငျကယျတှေ ဖွဈပါတယျ။
လုပျငနျးသုံးပစ်စညျးတှကေ သတငျးစာ စက်ကူလိပျကွီးတှေ အထညျလိပျတှေ သားရတေုလိပျတှေ အပွငျ သံပွား သံခြောငျး သဈသားတုတှေ ဆောကျလုပျရေးသုံး ပစ်စညျးတှေ မြားပါတယျ။ဒါတှအေပွငျ transit ဖွတျကြျောခှငျ့နဲ့လာတဲ့ အလှကုနျ စားသောကျကုနျတှေ တငျထားတဲ့ ကှနျတိနျနာ ကုနျသတ်ေတာတှလေညျး အတျောမြားပါတယျ။မွနျမာနိုငျငံကနေ ထိုငျးဘကျ ပွနျဝငျတာက ငွုပျသီးခွောကျ ကွကျသှနျနီ ပဲမြိုးစုံ အာလူးတှနေဲ့ ကြှနျးသဈနဲ့ လုပျထားတဲ့ ပရိဘောက အကွမျးထညျတှေ တှရေ့ပါတယျ။
နယျစပျလမျးကွောငျးကနေ ထိုငျးဘကျကို ဝငျလာတာက နှား သိုး ကြှဲ ဆိတျ နဲ့ ဓါတျသတ်တု ကုနျကွမျးတှကေို တှရေ့ပါတယျ ခငျဗြာ။”ကဲ အထကျက ကုနျစညျ စီးဆငျးမှုကို ကွညျ့ရငျ မွနျမာတှေ ဘာ့ကွောငျ့ ဆငျးရဲနသေလဲ ထိုငျးတှေ ဘာ့ကွောငျ့ ခမျြးသာနသေလဲ ဆိုတဲ့ အဖွကေို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ကိုယျ့ဆီက ဘာမှ မထုတျလုပျနိုငျပါပဲ လိုသမြှ ဝယျသုံးနရေတဲ့ အခွအေနကေနေ ပွောငျးနိုငျပါမှ နိုငျငံခမျြးသာမှာ ဖွဈပါတယျ။ဝေးဝေး ကွညျ့စရာ မလိုပါဘူး။
ရနျကုနျမွို့ထဲက Super market တဈခုခု သှားကွညျ့ရုံနဲ့ပွညျတှငျးထုတျ ဘယျလောကျရောငျးပွီး ပွညျပကုနျ ဘယျလောကျရောငျးတယျဆိုတာ သိသာပါတယျ။နိုငျငံ တိုးတကျလာဖို့ နညျးပညာနဲ့ လုံလောကျတဲ့ ပံ့ပိုးမှုတှေ အမွနျဆုံး လိုနပေါပွီ။
Previous Article က.ည.န ရုံးတှေ ပွနျဖှငျ့တော့မှာလား၊ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျတှေ ပွနျလုပျလို့ရနပွေီလား မသိသေးတဲ့သူတှအေတှကျ
Next Article ခြေနှစ်ချောင်းသာရှိပေမဲ့ အမြဲပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတဲ့ ခွေးလေး (ရုပ်သံ)